सिर्जना, कला र विचारको त्रिवेणी: सोम नारायणगोपाल
कवि, गीतकार तथा स्व. नारायणगोपालका अनन्य मित्र
नारायणगोपालसँग मेरो पहिलो भेट ०२१ मा भएको हो, दार्जिलिङको हिमालय कला मन्दिरमा । उनी ईश्वरबल्लभसँग घुम्न आएका थिए । ईश्वरबल्लभ नारायणगोपालको साथी । मेरो र गोपाल योञ्जनको पनि साथी । उनी काठमाडौंका भए पनि इन्द्रबहादुर राई र बैरागी काइँलासँग दार्जिलिङमै बसेर तेस्रो आयाम साहित्यिक आन्दोलन चलाइरहेका थिए ।
म कलेज पढ्दै थिएँ । गोपाल योञ्जन मेरो सबभन्दा घनिष्ठ साथी । नारायणगोपाल बडोदामा शास्त्रीय संगीत पढ्दै थिए । नारायणगोपाल गायक, गोपाल संगीतकार र म गीतकार । 'यी तीनजनालाई मिलाइदिन पाए गजब हुन्थ्यो,' भनेर ईश्वरबल्लभले नारायणगोपाल दार्जिलिङ आउँदा हाम्रो भेट गराइदिए । त, हिमालय कला मन्दिरमा उनीसँग चिनजान भयो । भोलिपल्ट ईश्वरबल्लभ, नारायणगोपाल, गोपाल योञ्जन र म घोडा चढेर घुमपहाड घुम्न गयौँ । त्यहाँ थियो- दिलमाया खातीको घर । उनको घर पनि पुग्यौँ । त्यस भ्रमणमा यताउताका कुरा धेरै भए । संगीतबारे त्यति कुरा भएन । नारायणगोपाल केही दिन दार्जिलिङ घुमेर बडोदा फर्किहाले ।
एक वर्षपछि नारायण ईश्वरबल्लभसँग फेरि दार्जिलिङ आए । दुईटा कामले आएका रहेछन् । पत्रमित्र पेमलासँग भेट्न र गोपाल योञ्जनले संगीत दिएका र मैले लेखेका गीतको खोजी गर्न । रत्न रेकर्डिङले नारायणका आठवटा गीत निःशुल्क रेकर्डिङ गरिदिने भएको रहेछ ।
त्यसैवेला, ईश्वरबल्लभले नारायण र गोपाललाई मित लगाइदिने प्रस्ताव गरे । उनीहरूले सहर्ष स्वीकारे ।
मित लगाउन दार्जिलिङको महाँकालडाँडा पुग्यौँ ईश्वर बल्लभ, कर्म योञ्जन, म र मित लाउने दुईजना　। महाँकालडाँडामा एउटा मन्दिर छ　। मन्दिरअगाडि धुनी बालेर उनीहरूलाई मित लगाइदियौँ, आगोलाई साक्षी राखेर　। नारायणगोपालका तर्फबाट ईश्वर बल्लभले र गोपाल योञ्जनका तर्फबाट मैले मित बोल्ने काम गर्‍यौँ　। यी दुई मितबाट नेपाली संगीतको नयाँ मानक स्थापना हुने भविष्यवाणी गरेका थियौँ　। शतप्रतिशत सत्य साबित भयो त्यो भविष्यवाणी　। यसो भन्न पाउनुमा म गर्व गर्छु　।
मित लगाएको भोलिपल्ट कि पर्सिपल्ट हो, नारायण, गोपाल, कर्म र म पेमलालाई भेट्न सुकियापोखरी गयौँ　। पेमला कहाँ के गर्दै थिइन्, थाहा थिएन　। सुकियापोखरी गएर सोधखोज गर्दा थाहा पायौँ- उनी कलेज सकेर सुकियापोखरीकै एउटा स्कुलमा पढाउँदै रहेछिन्　। हामी सोझै उनको स्कुलतिर लाग्यौँ　। गोपाल योञ्जन र म स्कुलभित्र गयौँ भने कर्म र नारायणगोपाल अलि परै बसे　।
पेमला भेटिइन्　। गोपाल योञ्जनले उनलाई 'मेरो मितज्यू तपाइर्ंलाई भेट्न आउनुभएको छ,' भने　।' पेमलाले मलाई पो नारायणगोपाल ठानिछन्　। उनी लजाइन्　। मुन्टो निहुराइन्　। उनको अनुहारको हाउभाउ देखेपछि उनको भ्रम हटाउन मैले भनेँ, 'पेमला, म नारायणगोपाल होइन　। पर उभेर यता हेरिरहेको छ नि... हो...त्यो नारायणगोपाल हो　।'
त्यसपछि, उनीहरूको चिनजान गराइदियौँ　। र, 'अलिक पर गएर दुईजना कुरा गर,' भन्याँै　। पहिले त दुवैजना लजाएका थिए, तर हामीले 'हाम्रो अप्ठयारो नमानी कुरा गरे हुन्छ,' भनेपछि यी दुईजना कुरा गर्न गए　। ठयाम्मै ढेड घन्टा कुरा गरे　। पछि, नारायणले सुनाए, 'पेमला, साह्रै असल र राम्री रहेछिन्　।' पेमलाले पहिलो भेटमा उनलाई गीत पनि गाउन लगाइछिन्　। उनले 'चिनारी हाम्रो धेरै पुरानो....' गाएछन्　। मैले लेखेको गीत हो त्यो　। पेमला र नारायणगोपालको भेटघाट सकिएपछि नारायणलाई जिस्क्याउँदै दार्जिलिङ झर्‍यौँ हामी　।
त्यसवेलासम्म नारायण र म धेरै नजिक भइसकेका थियौँ　। सुमधुर भइसकेको थियो हाम्रो सम्बन्ध　। सुरुमा म उनलाई 'नारान' भन्थेँ　। तर, पछि मैले उनलाई कहिल्यै 'नारान' भनिनँ　। हामी एक-अर्कालाई 'सोम' भन्थ्यौँ　। मिल्ने साथीलाई 'सोम' भन्ने चलन थियो दार्जिलिङमा　।
नारायणगोपालसँग ०२४ मा तेस्रो भेट भयो, काठमाडौंमा　। बडोदाबाट शास्त्रीय संगीत सिकेर आएका थिए उनी　। मचाहिँ दार्जिलिङबाट डिप्लोमा तहको पढाइ सकेर काठमाडौं आएको थिएँ　। मेरो घनिष्ठ साथी गोपाल योञ्जन भने काठमाडौं आएका थिएनन्　। उनका बुबा बितिसकेका थिए　। एक्लो सन्तान थिए उनी　। आमालाई छाडेर काठमाडौं आउन सकेनन्　। उनीविना काठमाडौं साह्रै बिरसिलो लाग्न थाल्यो मलाई　। काठमाडांैमा एक वर्षजति बसेपछि दार्जिर्लिङ गएँ र गोपालकी आमासँग उनलाई मागेँ　। उनकी आमासँग भनेँ, 'आमा, मलाई गोपाल दिनूस्　। म उनलाई काठमाडौं लैजान्छु　। हामी उतै बसेर जागिर पनि खान्छौँ, पढ्छौँ पनि　।' गोपालकी आमा मलाई पनि असाध्यै माया र विश्वास गर्नुहुन्थ्यो　। उहाँ गोपाललाई काठमाडौं पठाउन राजी हुनुभयो　।
नारायणगोपालको किलागलमा घर थियो　। गोपाल योञ्जन थापाथलीमा बस्थे, सानिमाको छोरीको घरमा　। म ज्ञानेश्वरमा डेरा लिएर बसेको थिएँ　। हरेक दिनजसो बेलुका हामी तीनजनाको भेट हुन्थ्यो　। हामी टोलटोल घुम्थ्यौँ　। टोलमा भजन गाउने चलन थियो　। नारायणगोपाल भजनका तालमा उफ्रि-उफ्रि नाच्थे　। हामीलाई पनि नचाउँथे　।
गोपाल योञ्जनको दिदीको घर, नारायणगोपालको घर र न्युरोडको इन्दिरा रेस्टुरेन्ट, यी तीन ठाउँमा हामी तीनभाइ धेरै भेट्थ्यौँ　। खुब गफिन्थ्यौँ　। गीतकार, संगीतकार र गायकको साइनोभन्दा साथीको साइनोले बाँधेको थियो हामीलाई　।
यसैबीच, कला/संगीतसम्बन्धी एउटा पत्रिका निकाल्ने निधो गर्‍यौँ हामीले　। नाम मैले जुराएँ, 'बागीना'　। बागीना अर्थात् बाजा, गीत र नाच　। बागीना त्रैमासिक रूपमा निकाल्ने निर्णय गरियो　। प्रकाशक/सम्पादक नारायणगोपाल रहे भने म र गोपाल योञ्जनचाहिँ सम्पादक　। बागीना चार अंक नियमित निक्लियो　। रचना र विज्ञापन खोज्ने, वितरण गर्ने हाम्रो समूह सबै काम आफैँ गथ्र्याँ　। रचना अभाव हुँदा विभिन्न उपनाम राखेर आफैँ लेख्थ्यौँ　। एक वर्षसम्म बागीना नियमित प्रकाशन गर्‍यौँ　। तर, पछि विज्ञापन र लेख-रचनाको अभाव हुन थाल्यो　। केही वर्ष वर्षमा एक-दुई अंकमात्रै प्रकाशित हुन थाल्यो बागीना　। तर, पछि त बन्दै गर्नुपर्ने भयो　।
०२७ फागुनको कुरा हो । दाजु सूर्यबहादुर थापा (पूर्वप्रधानमन्त्री) सँग ज्ञानेश्वरमा भाडाको घरमा बस्थेँ म　। एक दिन बिहानै नारायणगोपाल सानो बि्रफकेस बोकेर मेरो कोठामा आइपुगे　। 'ए सोम, यति बिहानै तिमी झोला बोकेर कता ?' मैले सोधेँ　। 'सोम, मलाई अलिक अप्ठयारो पर्‍यो　। बिहे गर्न जान लागेको....पैसा पनि छैन...के गर्ने होला ?'
मेरो संयोजनमा पुलिस क्लबमा 'मितज्यू नाइट' भन्ने नारायणगोपाल र गोपाल योञ्जनको सांगीतिक कार्यक्रम भएको भएको थियो　। त्यसबाट उठेको रकममध्ये संगीत सामग्री किनेर बचेको १६ हजार रुपैयाँ मसँग थियो　। त्यसमा खोजखाज गरी दुई हजार थपेर दिएँ　।
नारायण बिहे गर्न एक्लै दार्जिलिङ गए　। पहिलो भेटदेखि नै पेमलासँग प्रेम थियो उनको　। पेमलालाई उनको परिवारले स्वीकार गरेन　। उनको परम्परागत नेवारी परिवारले 'अर्की जातकी बुहारीलाई' अस्वीकार गरेपछि नवदम्पती पोखरा गएर बस्न थाल्यो　। भूपी शेरचनको घरमा बस्थे उनीहरू　। दुवैजना पोखरामा पढाउन थाले　। म धान चामल कम्पनीको महाप्रबन्धक भएर झापा गएँ　। गोपाल योञ्जन काठमाडौंमै बसेर कलेज पढाउँदै थिए　। त्यतिवेला हामी तीनजना एक-अर्कालाई धेरै चिठी लेख्थ्यौँ　। पोखराबाट मलाई नारायणले तीन दर्जन चिठी पठाएका थिए　। मैले पनि उत्तिकै संख्यामा पठाएको थिएँ　।
०३७ तिर नारायणगोपाल र पेमला पोखराबाट काठमाडौं आए　। म पनि झापाबाट काठमाडौं फर्किएँ　। त्यसवेलाका मन्त्री केबी शाहीले मलाई राष्ट्रिय नाचघरको महाप्रबन्धकमा सिफारिस गरे　। तर, मैले नारायणगोपाललाई प्रस्ताव गरेँ　। शाही 'हुन्न' भन्दै थिए　। तर, मैले 'नारायणगोपाल उपयुक्त मान्छे हो,' भनेर अडान लिएँ　। एक दिन शाहीले हामी दुवैजनालाई बोलाए　। उनले नारायणलाई भने, 'नारायण, तिमीले साथी त भन्नुको पाएका रहेछौ ! मैले उसको नाममा नियुक्ति तयार पारेको थिएँ, तर उसले तिमीलाई सिफारिस गर्‍यो　।' साथै नारायणकै अगाडि उनले मलाई भनेका थिए, 'नगेन्द्र, नाचघरमा हामीले तिमीलाई पठाएको हो　। त्यहाँ तलमाथि भयो भने नारायणलाई होइन, म तिमीलाई समात्छु　।'
नारायण खानपिनमा सौखिन थिए　। पकाउन अघि सर्थे र असाध्यै मिठो पकाउँथे　। खुर्सानीको त पारखी नै थिए　। मेरी श्रीमती मञ्जु रातो खुर्सानीको लेदो अचार बनाउन खप्पिस थिइन् भने नारायण मेथीको अचार बनाउन　। हामी मेथीको अचार र रातो खुर्सानीको लेदो अचार साटासाट गरेर खान्थ्यौँ　। खुर्सानीको लेदो अचार सकिनासाथ उनी मेथीको अचार बोकेर मेरो घरमा आइहाल्थे　।
एकचोटि नारायण, गोपाल र म 'मितज्यू नाइट' कार्यक्रम लिएर आसाम जाने क्रममा विराटनगरस्थित मेरो घरमा केही दिन बसेका थियौँ　। मेरी आमा नारायणगोपालले खुर्सानी र गोपाल योञ्जनले घ्यू खाएको देख्दा छक्क पर्नुभो　। उहाँले नारायणगोपाललाई खुर्सानीकुमार र गोपाल योञ्जनलाई घ्यूकुमार नाम राखिदिनुभएको थियो　।
जेरी-स्वारी र जर्मन प्रविधिमा बनेको ससेज पनि उनलाई साह्रै मन पथ्र्यो　। खानमा असाध्यै सौखिन थिए　। खान मन लागेको कुरा नखाई नछाड्ने उनको बानी थियो　। वीर अस्पतालको आइसियुमा रहँदासमेत उनले आफ्नो सौख त्यागेका थिएनन्　। उनको अवस्था गम्भीर थियो　। एक दिन डाक्टरले 'मनपर्ने खाना थोरै दिएहुन्छ,' भनेपछि मैले उनलाई दुईटा जेरी र अलिकति मासु दिएँ　। उनी भने 'दुई पाउ हलुवा, दुई पाउ जेरी र ससेज चाहिन्छ मलाई,' भन्दै केटाकेटीले जस्तो जिद्दी गर्न थाले　। घुर्की देखाउन थाले　। उनले मागेजति नदिई धरै पाइनँ मैले　।
नेपाली संगीतको साह्रै चिन्ता थियो उनलाई　। उनको स्वास्थ्यावस्था एकदमै नाजुक भइसकेको थियो　। सायद, उनलाई मृत्युको पूर्वाभ्यास भएको थियो　। एक दिन बिहानै मलाई बोलाए र भने, 'ए सोम, तुरुन्तै वकिल बोलाएर ल्याइदेऊ　।' मैले भनेँ, 'यस्तो वेला किन वकिल चाहियो तिमीलाई ?' उनले गम्भीर भएर भनेका थिए, 'म अब बाँच्दिनँ　। मर्नुअघि मेरो सबै सम्पत्ति नेपाली संगीतको विकासका लागि ट्रस्ट बनाएर राख्छु　। नेपाली संगीतले अभावमा बाँच्न नपरोस् भन्नेे चाहना छ मेरो　।' उनी जिद्दी गरिरहेका थिए, तर मैले 'तिमी निको होऊ, अनि जे-जे गर्नुपर्छ गरौँला,' भनेर सम्झाएँ　।
अस्पताल भर्ना भएदेखि उनको मृत्यु भएको दिन, १८ मंसिर ०४७ सम्म एकछिन नछोडी मेरी श्रीमती र मैले उनको रेखदेख गर्‍यौँ, एक महिना जति　। उनी काठमाडौंको, म धनकुटाको　। उनी नेवार, म थापा　। उनको र मेरो रगतको नाता नभए पनि अन्तिम क्षणसम्म एउटै घरका परिवार जस्तो भएर बस्यौँ हामी　। एउटै घरका परिवारका सदस्य पनि त्यति नजिक र त्यति घनिष्ठ भएर बस्न सक्दैनन् होला । हामीबीच गायक नारायणगोपाल र गीतकार नगेन्द्र थापाको नाताभन्दा 'सोम' नारायण र 'सोम' नगेन्द्रको नाता प्रगाढ थियो　।
मैले लेखेका करिब डेढ दर्जन गीत गाएका छन् उनले　। 'सोम, गीत लेख न,' भनिरहन्थे　। पछि लेखौँला भन्दै मैले उनलाई टारिरहँे　। तर, मलाई यति वेलाचाहिँ एकखाले पीडा हुन्छ　। नारायणगोपाल अचानक त्यति छिट्टै बित्छन् भन्ने थाहा पाउन सकेको भए अरू पच्चीस/तीसवटा गीत लेखेर उनलाई गाउन दिन्थेँ होला　। तर, सधै सँगै भइन्छ जस्तो लाग्थ्यो　। र, पछि लेखुँला भन्दाभन्दै उनका लागि लेख्न पाइनँ　।
उनको र मेरो एउटा विषयमा प्रायः विवाद भइरहन्थ्यो　। नेपाली संगीत कस्तो हुनुपर्छ ? भन्ने विषयमा　। म भन्थेँ, 'नेपाली संगीतले आÏनै पहिचान बनाउनुपर्छ　। शास्त्रीय र लोकसंगीतका आधारमा यसले मौलिक पहिचान बनाउनुपर्छ　। तर, नारायणगोपाल मसँग सहमत थिएनन्　। उनी भन्थे, 'सोम, संगीतको देश हँुदैन, जात हुँदैन र पहिचान हुँदैन　। यसको न भाषा हुन्छ न यसलाई कुनै सीमारेखाले छुट्टयाउन सक्छ　।' संगीतप्रतिको फराकिलो दृष्टिकोण थियो उनको　। गायकले विनासाधना विनामिहिनेत गाएकोमा दुःखी थिए उनी　। उनी सधैँ भन्ने गर्थे, 'घाँटीबाट मात्रै गाइयो, हृदयदेखि गाइएन भने नेपाली संगीत कता पुग्ला ?'
अहिले म बेखबर भएर बसेको छु　। सांगीतिक तथा साहित्यिक कार्यक्रममा जान छाडिसकेँ　।
नारायणगोपाल र गोपाल योञ्जन मेरो जीवनको जीवन थिए　। उनीहरू दुवैजना बितेदेखि जीवनविनाकोे जीवन बाँचिरहेको छु म　।